MDID - # 1 मेडिकल उपकरण इन्वेंटरी डाटाबेस | बेर आश्चर्यजनक
यो २०२० हो र कोभिड १ of को बृद्धिसँग भेन्टिलेटरहरू र अन्य चिकित्सा उपकरणहरूको गहन माग बढेको छ। यसले बदलेमा, आपतकालमा चिकित्सा उपकरणहरू राम्रोसँग व्यवस्थित गर्ने तरिकाको आवश्यकता देखा पर्‍यो।
MDID प्रोफेशनल, गैर-प्रोपिएटरी, सस्तो र पूर्ण समाधान हो अस्पतालहरूको आवश्यकता पूरा गर्न। MDID ले ट्र्याक गर्न सक्दछ, इन्वेंटरी, बारकोड, मर्मत, सेयर / भाँडा / loanण, तालिका, रिपोर्ट, चेक इन / आउट मेडिकल उपकरणहरू।
MDID सबै कम्प्युटरहरू, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरू र वेब विश्व चौडाई २ 24/7 मा उपलब्ध छ। यो एक स्थान वा धेरै स्थानहरूमा प्रयोग गर्न सजिलो छ।
MDID को बारेमा
मेडिकल उपकरण इन्वेंटरी डाटाबेस (MDID)
MDID समेकित जानकारी
हरेक उपकरण, यो हार्डवेयर जानकारी, तालिका, ईतिहास, मर्मत, र सबै एक धेरै सुविधाजनक ठाउँमा रिपोर्ट गर्दछ। कुनै पनि जानकारीको लागि खोजी योग्य।
✓ सजिलो उद्धरण उत्पादन
Ful शक्तिशाली सूची ट्र्याकिंग
✓ बार र QR कोड मुद्रण र स्क्यानिंग
This यस बर्षको लागि नि: शुल्क
Ful शक्तिशाली ट्र्याकिंग
✓ क्रस प्लेटफर्म - विन्डोज, म्याक, आईओएस, एन्ड्रोइड र वेब आधारित।
किन प्रयोग गर्ने मेडिकल उपकरण सूची डाटाबेस?
लेखा, ट्र्याकिंग, ईन्भेन्टरी, बारकोड, मर्मत
साझेदारी / भाँडा / anण, तालिका, रिपोर्टहरू सिर्जना, चेक आउट / चिकित्सा उपकरणहरू।
१००% नि: शुल्क
विशेष: डाटाबेस यस वर्षको लागि निःशुल्क हो
सबै जानकारीहरू सबै उपकरणहरू, भागहरू, म्यानुअलहरू, सबै आपसमा जोडिएको, अप-टु-डेट, सुरक्षित र एक ठाउँमा राख्नुहोस्।
आइकन 3स्केचको साथ सिर्जना गरियो।
पहुँच, कुनै पनि समय, कहीं पनि
MDID एक कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, एक नेटवर्क ल्यान, स्थान, क्षेत्र, देश वा विश्वव्यापी रूपमा सर्भरका लागि।
कोविड १ of को आगमनको साथ विश्वव्यापी चिकित्सा उपकरण र आपूर्ति को लागी अभूतपूर्व मांग आयो। महामारीको समयमा अस्पतालहरू ओइरिएका थिए। विशेष रूपमा भेन्टिलेटरहरू कम आपूर्तिमा थिए र पुष्टि भएका घटनाहरूको संख्या र अस्पताल भर्ना बढेको कारण। एउटा क्षेत्रमा अभाव हुनेछ र अर्कोमा अधिक हुन सक्छ। यो समस्या समाधान गर्न मेडिकल उपकरण ट्र्याकिंग डाटाबेस (छोटोका लागि METD) सिर्जना गरिएको थियो।
METD - चिकित्सा उपकरण र औषधीहरूको ठूलो सूची भएका कम्पनीहरूका लागि यो अमूल्य डाटाबेस हो। एमईईडीटीले ठूलो स number्ख्यामा मेडिकल आईटमहरू (भेन्टिलेटरहरू, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई), औषधिहरू, इत्यादिहरूको स an्गठनलाई यसको सूचीको ट्र्याक राख्न, ndण दिन वा भाँडा, चलानी, बार कोड, चेक इन / आउट, लेखा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ। ट्र्याक, बार कोड / QR कोड प्रिन्टिंग र निलो टुथ स्क्यानर र अधिक प्रयोग स्क्यान गर्दै।
यस डाटाबेसले भिडियो उपकरण भाँडा कम्पनीलाई प्रक्रियामा सबै चरणहरूमा सूची, भाँडा, इनभ्वाइस र उपकरणहरू ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। यो भाडा छिटो गर्न, अधिक लगातार र कुशलतापूर्वक गर्न अनुमति दिँदछ।
यस डाटाबेसको साथ सम्भव छ संघीय वा राज्य सरकारले सम्पूर्ण राज्य, क्षेत्र वा देश आपूर्ति गर्न चिकित्सा उपकरण गोदामहरू स्थापना गर्न। उदाहरणका लागि महामारीको लागि भारी संख्यामा भेन्टिलेटरहरू आवाश्यक पर्न सक्छ। मांग विभिन्न क्षेत्रहरुबाट छालहरुमा आउँछ। किन हजारौं भेंटिलेटरहरू अप्रयुक्त प्रयोग भेंटिलेटरहरू अस्पतालमा राखिएका छन्? अब प्रत्येक मेडिकल आईटमलाई भित्र र बाहिर ट्र्याक गर्नुहोस्, यो स्थान हो, जसले यसका लागि हस्ताक्षर गर्‍यो र कुन समयमा रोगीले कुन मेसिन प्रयोग गर्दैछ। साझेदारी गर्नुहोस् वा उपकरण भाँडामा लिनुहोस्, यसलाई ट्र्याक गर्नुहोस् जुन यो छोटो र लामो अवधि हो। सबै भन्दा राम्रो, खोज र कुनै पनि चीज छिटो फेला पार्नुहोस्। द्रुत रिपोर्टहरू प्राप्त गर्नुहोस्। यो चिकित्सा उद्योग को लागी चिकित्सा उपकरण डेटाबेस हो।
METD डाटाबेस लोकप्रिय, शक्तिशाली, र प्रयोग गर्न सजिलो म्याक, विन, आईओएस, एन्ड्रोइडमा ग्राहकको रूपमा चलाउनका लागि फाईलमेकर डाटाबेसमा आधारित छ। वेबमा पनि जब फाईलमेकर सर्भरबाट चालु हुन्छ। सबै उपकरणहरूमा काम गर्न वेबमा सर्भरबाट चालु गर्नुहोस्। जब तपाईं बढ्दै जानुहुन्छ र तपाईंको आवश्यकताहरू र सम्पत्तिहरू बढ्दै जान्छ, डाटाबेस बढ्न सक्दछ। प्रणाली पूर्ण रूपमा विस्तार योग्य छ।
सबैभन्दा प्रमुख भाडा डाटाबेस प्रणालीहरू उपलब्ध एक "सबै प्रणाली फिट गर्दछ" ले ग्राहकहरु को सफ्टवेयर मा आफ्नो प्रक्रियाहरु अनुकूलन आवश्यक दृष्टिकोण। हामीले पत्ता लगायौं कि विभिन्न प्रकारका भाडा व्यवसायहरूसँग प्राय: आफ्नै आफ्नै व्यवसायको मोडेल हुन्छ।
कार्यक्षमताको केही क्षेत्रहरू जुन नाटकीय रूपमा भिन्न हुन सक्दछ उद्धरण निर्माण प्रक्रिया, इन्भेन्टरी व्यवस्थापन, ग्राहक आधारित इन्भेन्टरी प्रदर्शन र सूची तालिका।
MDID उपकरणहरू, स्थानहरू, लि linked्क गरिएको डिलिभरी कार्य अर्डरहरू र इनभ्वाइसहरूको स्वचालित उत्पादन, रिमाइन्डरहरू र इनभ्वाइसहरूको एकीकृत ईमेल, इन्भेन्टरी बस्तुहरूका लचिलो समूह सहित इन्टिग्रेटेड “हराएको र बिग्रिएको” ट्र्याकिंग र रिपोर्टि manage प्रबन्ध गर्ने क्षमता समावेश गर्दछ।
समस्या समाधान गर्दै, अधिकतम उत्पादकता
मेडिकल उपकरणहरूको लागि डाटाबेस
प्रश्नहरू? हामीलाई सोध्नुहोस्
बहु अस्पताल, क्लिनिक, अनुसन्धान सुविधा र विश्वविद्यालयहरूमा उपकरणहरू ट्र्याक गर्नुहोस्
सूची र रिपोर्टहरू
एक नजर इन्भेन्टरी र रिपोर्टहरूले भूत, वर्तमान र भविष्यका लागि उपकरण उपलब्धतामा तत्काल अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ
एक सुविधा को लागी मेडिकल उपकरणहरु बाट सम्बन्धित सबै वित्तीय लेनदेन को रेकर्ड गर्नुहोस्
डाटाबेसले बिरामीहरूको बिमा कभरेजका लागि रणनीतिहरू मिलाउन हब प्रदान गर्दछ।
उपकरण र फोटोहरूको फोटोहरू प्रत्येक रेकर्डको साथ, पहिचान सरलीकृत गर्दै।
विवरण रेकर्ड गर्नुहोस्
संगठन र मेडिकल उपकरणसँग सम्बन्धित सबै मेटाडेटाको लागि ठाउँ
वरिष्ठ फाइल निर्माता विकासकर्ता
जीवन यो मा निर्भर गर्दछ
आवश्यक पर्दा उपकरणहरू खोज्नुहोस्
संगठित = सफलता
परामर्श सेट अप गर्नुहोस्
आज MDID परीक्षण गर्नुहोस्
डाउनलोड गर्नुहोस् र म्याक वा विन्डोजमा परीक्षण गर्नुहोस्
वा एउटा अनलाइन डेमो अनुरोध गर्नुहोस्
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् विवरणहरू प्राप्त गर्नका लागि
को सूची व्यवस्थापन विभिन्न प्रकारको बार-कोडिंग सहितको प्रक्रिया
अनुकूलन कुनै पनि समयमा उपलब्ध छ जीवनको उचित समयमा चार्जको लागि।
मूल्य निर्धारण- प्रयोगका सर्तहरू
COVID-19 संकटको बेला अनुप्रयोग नि: शुल्क छ। यो अगस्त ,१, २०२१ सम्म नि: शुल्क छ। नि: शुल्क अवधिको अन्तमा, प्रयोगकर्ताहरूले प्लम अमेजिंग वेबसाइट मार्फत निरन्तर पहुँच खरीद गर्न सक्दछन्। मूल्य नाफामुखी र नाफामुखी संगठनहरूका लागि फरक हुन्छ।
नि: शुल्क अवधिमा बग फिक्सहरू समावेश हुन्छन्। बगलाई फाईलमेकर प्रो अनुप्रयोगसँग एक मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, अपरेटि system प्रणाली, सर्भर सफ्टवेयर, कम्प्युटर कन्फिगरेसन, आदि समावेश गरेर होस्ट गरिएको वातावरण होईन। एप्लिकेसन फाइलमेकरको गलत संस्करणसँग काम गर्दैन। (प्रणाली आवश्यकताहरू हेर्नुहोस्।)
परिवर्तनहरूका लागि अनुरोधहरू जस्तै सानो परिवर्तनहरू अनुरोध गर्न सकिन्छ यदि तिनीहरू विश्वव्यापी रूपमा लाभदायक छन्। अनुरोध जटिलता र प्रयास को लागी मूल्यांकन गरिनेछ। विकासकर्ताले निर्णय बदल्छ कि यो परिवर्तन समावेश गर्न सकिन्छ।
वाणिज्य मूल्य: एक बर्षको लागी नि: शुल्क
शैक्षिक मूल्य: एक बर्षको लागी नि: शुल्क
प्रशिक्षण (यदि आवश्यक भएमा): एक बर्षको लागी नि: शुल्क
समर्थन: २ महिना को लागी नि: शुल्क
कृपया पुग्न संकोच नखोज्नुहोस् यदि तपाईंको संगठनसँग प्रश्नहरू छन् वा MDID वा अन्य फाईलमेकर डाटाबेसको सन्दर्भमा सेवाहरूको खाँचो छ। यो हामी गर्छौं।
राम्रो डाटाबेसले तपाईंको अस्पताल व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ, तनाव र तपाईंको पेशेवरहरूमा मागहरू। MDID जस्तो डाटाबेसले सरल, सामान्य ज्ञान कार्यप्रवाह प्रदान गर्दछ जुन अर्डर र स्वचालित जानकारीलाई प्रदान गर्दछ जुन अन्यथा अराजकता हुन सक्छ। अराजकता पैसा खर्च।
सोध्नुहोस् र हामी तपाईंको प्रश्नको उत्तर दिन सक्छौं। हामीलाई यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् एक प्रदर्शनको लागि।